Wafdiga Dowladda Qatar oo Qorshe qarsoon ka wada Soomaaliya & Xogta Shaqsiga la wada. | Allgalgaduud.Com
Home Wararka Maanta Wafdiga Dowladda Qatar oo Qorshe qarsoon ka wada Soomaaliya & Xogta Shaqsiga...
Wafdiga Dowladda Qatar oo Qorshe qarsoon ka wada Soomaaliya & Xogta Shaqsiga la wada.
Safarka masuulkan ayaa kusoo aadaya xili Soomaaliya wajaheyso qalalaase siyaasadeed iyo amni daro kadhashey khilaafka doorashada. ilo xog hogaal ah ayaa xaqiininaya in safarka masuulkan uu daaran yahay labo ujeedo oo midda hore tahay, in dowladda Qadar ay muujiso in ay dhexdhaxaad ka tahay siyaasadda Soomaaliya ayadoo mudooyinkii danbe lagu eedeynaayey in ay taageero indho la’aan ah siiso madaxda waqtigoodu dhamaadey ee Soomaaliya.
CIA-da mareyanka Qeybteeda geeska africa ayaa lasheegey in ay gadaal kariixeyso safarka mas’uulkan iyo qorshaha socda. uqaabilsanaha Soomaaliya ee CIA-da korneel Cabdullahi Dheere kana tirsan saraakiisha sare ee NISA, ayaa lasheegey in uu casuumaadda wafdigan lahaa, isagoona gacanta ku hayo howlaha wafdigan.
shaqada wafdigan danbe ayaa gebi ahaanba lala socon ajandaha rasmiga ah ee kala hadlayaan Al-shabaab marka laga reebo in wada hadal ay lagalayaan kooxdaasi. ilo amni ayaa noo sheegey in ilaa hada lafaham sanyahay in uu dhacey labo kulan oo xasaasi ah ayadoo ay adagtahay in la ogaado saraakiisha shirka ka qeyb galeysey iyo heerarkooda.
Xubno ku dhow dhow wafdigan ayaa laga soo xigtey in afarkooda uu qaadan doono muddo labo maal mood ah, waxaana lafilayaa sacaadaha soo socoda wafdiga garabkiisa siyaasadda in uu kulamo la qaato madaxda mucaaradka Soomaaliya iyo madaxda DFS. Howlaha sirdoon ee Muqdisho ka socda ayaa waqtigi qeexi doonaa natiijada ka dhalata, xilli aysan ku baraarugsaneyn inta badan siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliya…….